Madaxweynaha Somaliland Ka Hadlay Saraakiishii Lagu Laayey Afgambigii Itoobiya Oo Maanta Loo Baroor-diiqay – HCTV
Madaxweynaha Somaliland Ka Hadlay Saraakiishii Lagu Laayey Afgambigii Itoobiya Oo Maanta Loo Baroor-diiqay
0	June 26, 2019 5:35 pm
Faransiiska Oo Dedaal Ugu Jira Sidii Loo Dhawri Lahaa Heshiiskii Nuclear-ka Iran
Xiisada Iran & Maraykanka Oo Ka Sii Daraysa Iyo Trump Oo Cunaqabatayno Cusub Ku Soo Rogay
Itoobiya (HCTV) – Magaalooyinka Bahar-daar iyo Maqale ee Dalka Itoobiya ayaa Baroor-diiq loogu sameeyay Madaxweynihii Kililka Axmaarrada iyo Saraakiil uu ka mid yahay Taliyihii Ciidammada Millateriga Itoobiya oo lagu dilay Isku-day Afambi dhawaan ka dhacay Kililka Axmaarrada.
Madaxweynihii Kililka Axmaarrada ayaa baroor-diiq loogu sameeyay Magaalada Bahar-daar, waxaana Baroor-diiqdaa ka qayb-galay Ciidammada iyo Ardayda Dugsiyada sare iyo Jaamacadaha, halka Magaalada inteeda kale ay Bandoo saaran tahay.
Sidoo kale, waxa Magaalada Maqale ee Xarunta Gobolka Tigrey loogu baroor-diiqay Taliyihii Ciidammada Jeneraal Seare Mekonnen ayaa la sheegay inay toogteen llaaladiisu intuu uu socday isku-dayga Afgambiga iyo Abbaanduulihii Ciidammada Itoobiya oo isagun ku dhintay Afgambigaasi fashilmay.
Raysal-wasaaraha Itoobiya ayaa ka qayb-galay Baroor-diiqda loo sameeyay Saraakiisha La laayey.
Dhanka kale, Madaxweynaha Somaliland, Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa Dawladda federaalka Itoobiya ka Tacsiyadeeyay Geerida Saraakiisha iyo Madaxweynaha Kililka Axmaarrada “Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi Waxa uu dawladda Itoobiya ka tacsiyadeeyey saraakiishii iyo siyaasiyiintii la laayey, waxaana uu sheegay inay xukuumad ahaan dareenka xanuunka leh la wadaagayaan shacabka iyo xukuumadda Itoobiyaba.” Ayaa lagu yidhi, War Qoraal ah oo ka soo baxay Madaxtooyada Somaliland.